शिल्पा पोखरेल पक्राउ पर्ने पक्का ! अदालतबाट आयो यस्तो आदेश … – ताजा समाचार
शिल्पा पोखरेल पक्राउ पर्ने पक्का ! अदालतबाट आयो यस्तो आदेश …
काठमाडौं, २५ साउन । फिल्म निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल प*क्राउ पर्ने लगभग निश्चित भएको छ ।
अदालतले प*क्राउ पूर्जी जारी गरेको दुई हप्ता पुगिसक्दासम्म फ*रार रहेका उनीहरु अब लगभग प*क्राउ पर्ने निश्चित भएको हो ।
छविकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले श्रीमान छवि र शिल्पाविरुद्ध बहुबिहेको मु*द्दा दायर गरेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले शिल्पा र छविका नाममा प*क्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।
हेमाले मु*द्दा दायर गरेपछि जिल्ला अदालतले प*क्राउ पूर्जी जारि गरेको विरुद्धमा शिल्पाले उच्च अदालत पाटनमा प*क्राउ रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै गत साउन १६ मा रिट निवेदन गरेकी थिइन् ।
उच्च अदालतले सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्दय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र सरलाकुमारी पाण्डेको इजलाशले शिल्पाको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
उच्चको यो आदेशपछि छवि र शिल्पालाई पक्राउ गर्न कानुनी बाटो बलियो भएको छ